Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay safiirka Ingiriiska u fadhiya Mareykanka inuu yahay nin doqon ah oo aanan fakarin.
“Waa nin doqon ah” ayuu yiri Madaxweyne Trump, xilli Ingriiska iyo Mareykanka ay ka dhex taagan tahay xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhalatay Emailo soo shaac baxay.
“Waa in uu ka hadlaa arrimaha ka taagan dalkiisa iyo Ra’iisul wasaaraha UK, May guuldarrada ay kasoo hoyisay arrinta ka bixidda Midowga Yurub, wax dan ah kama gelin dhaleeceenta lii jeedinayo si kastaba ha u xumaadeen ” ayuu yiri Trump.
Hadalkan Trump ayaa kusoo beegmaya xilli xafiiska Downing Street ee looga taliyo dalka Ingiriiska uu soo saaray war murtiyeed lagu sheegay in Ra’isulwasaaraha Britain Theresa May ay kalsooni buuxda ku qabto safiirka u fadhiya Maraykanka, inkasta oo madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu sheegay in uusan la shaqayn doonin Sir Kim Darroch.
“Safiirka waalan ee UK ee sanka laga galiyay Maraykanka ma ahan qof aan ku faraxsanahay, waa mid doqonimada ay ka tan badatay” ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka.
Hadalka Trump ee ah ‘lama shaqayn doono Kim’ ayaa ka dhignaan kara in danjiraha si rasmi ah looga eryay Maraykanka, lana siiyay waxa loo yaqaano Persona Non Grata.